Shaqaalaynta - wararka shaqada | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Dhammaan wararka isaga ku saabsan shaqada iyo shaqo la’aan. Qeybtaan waxaad awoodi doontaa inaad lasocoto dhamaan isbeddelada sharci dejinta ee ku dhaca heerka shaqada. Waxaan sidoo kale kugula socodsiinaynaa waxa ugu muhiimsan sahaminta shaqada iyo shaqo la’aanta Spain iyo Yurub.
Shaqaalayntu waxay had iyo jeer ahayd mid ka mid ah mowduucyada sida aadka ah u khuseeya muwaadiniinta, qaybtaan ka mid ah shabakadda waxaan kuugu soo bandhigeynaa dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah si aad ula socoto dhammaan wararka iyo wararka xiisaha u leh bay'ada shaqada.
Haddii aan haysto 2 shaqo, miyaan bixiyaa labanlaab?
by Encarni Arcoya samee Bilaha 3 .
Waxa aad u sii badanaysa in aan hal shaqo oo keliya haysan, balse ay tahay laba. Shaqo la'aanta iyo xaqiiqda ah in ...
Intee in le'eg ayay SEPE qaadanaysaa in laga jawaabo codsi ka hor
Marka aad waydo shaqadaada laakiin aad ogtahay in aad awoodi doonto inaad soo qaadato manfacyada shaqo la'aanta, waxaad noqonaysaa mid dabacsan. Laakiin,…
Ma xigashada ERTE ee shaqo la'aanta?
by Casudi casals samee Bilaha 4 .
Tan iyo markii uu faafay COVID-2020 ee weyn XNUMX, waxa loogu yeero ERTES ayaa aad muhiim ugu ah…
Sida loo ururiyo fasaxyada la bixiyo iyo kuwa aan la isticmaalin
by Encarni Arcoya samee Bilaha 5 .
Markaad ka shaqaynayso qandaraas, waxaad ogtahay, sharci ahaan, inaad xaq u leedahay maalmo fasax ah oo xiriir ah. Si kastaba ha ahaatee,…
Muddada tijaabada ee qandaraas aan xadidnayn: waa maxay, intee ayay jirtaa, maxaa dhacaya haddii shaqada lagaa saaro
Helitaanka shaqo waa riyo dad badan, gaar ahaan haddii halkii qandaraas ku meel gaar ah ay ku siinayaan…
Goorma ayaa la ururiyaa mushaharka xagaaga ee dheeraadka ah?
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu weyn ee qandaraas lahaanshaha iyo noqoshada shaqaale waa inaadan helin…
Waa maxay hawlgabka qayb ka mid ah kuwa iskood u shaqeysta
Qofka iskii u shaqeysta wuxuu leeyahay faa'iidooyin gaar ah marka loo eego shaqaalaha shaqeeya. Laakiin sidoo kale faa'iidooyin badan iyo hawlgab ayaa ahaa mid…
Waa maxay joojinta shaqada iyo mushaharka
Mid ka mid ah hubka ay tahay in shirkaddu ay "xakameyso" shaqaalaheeda oo ay uga hortagto inay abuuraan xaalado…
Sida loo xidho shaqo la'aanta onlayn talaabo talaabo
Ogaanshaha sida loo xidho shaqo la'aanta intarneedka talaabo talaabo maaha wax adag. Inkastoo uu jiro nidaam...
Xil ka qaadis aan cadaalad ahayn
by Encarni Arcoya samee Bilaha 8 .
Shaqaale kasta waxa uu rabo waa in uu shaqadiisa ilaashado. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira waqtiyo, in ka badan ...
Hubaal wax ka badan hal mar inaad maqashay ereyga madax-bannaanida. Xaqiiqdii, waxaan dhihi karnaa inay tahay moodada hadda ...
Waa maxay mushaharka magacaaban iyo kan dhabta ah
Warqadda is casilaadda
Warqadda shaqo ka joojinta aan cadaaladda ahayn
Sida loo xisaabiyo degitaankaaga
Sida loo shaabadeeyo shaqo joojinta iyo dhammaan tallaabooyinka la raacayo
Waa maxay mushaarka dareeraha
Sida loo aqriyo mushaarka oo aad ogaato inay caadi tahay
Hawlaha badan ee ganacsadaha